Rose of Sharon: အပျင်းပြေ
Posted by rose of sharon at 10:05 AM
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကဘဲ ဒီမှာလည်း သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အပျော်ဆော့တာ ၂၀ ကျော်လောက် ရှုံးသွားခဲ့ပြီးပြီ..တွမ်တီဝမ်း ကို
အလှည့်ကျ ဒိုင်ကိုင်ရလို့ ကိုင်လိုက်တာမို့ပေါ့...တွမ်တီဝမ်း
တခုတည်း ဆော့တတ်တယ်...သူငယ်ချင်းတွေက ကျန်တာသင်ပေးမယ်ဆိုတော့ မသင်ပေးဖို့ တားထားရတယ်...တော်ကြာ စွဲသွားမှာစိုးလို့...တခါတလေ
အနော် September 15, 2009 at 12:20 PM
ကြည့်ရတာ ပျော်စရာကြီးနေမှာပဲနော် မမ
ဟိဟိ အနော်တို့လဲ ကျောင်းတုန်းကတော့ ကစားတယ်
ဒါပေမဲ့ အခုတော့ တယောက်တည်း ပျင်းရင် ကွန်ပျူတာက ဖဲပဲ ကစားနေရတယ် :)
စူးနွယ် September 15, 2009 at 1:06 PM
အိမ်မှာလည်း ဟိုးတုန်းက အမေဖေနဲ့ သူတို့မိတ်ဆွေလင်မယားတွေ အပျင်းပြေ ကစားကြတယ်။ တို့တွေက ကလေးတွေပေါ့။
ရွက်လွင့်ခြင်း September 15, 2009 at 1:21 PM
သြော် ဖန်ခွက်လေးတွေပါ ချထားရင် ပိုပြည့်စုံမယ်
ကိုရေတမာ September 15, 2009 at 2:59 PM
မကြီးရာ ကျနော့အမလုပ်နေပြီး ရှုံးရလား.. နောက်တစ်ခါကျနော်ပါလိုက်မယ်နော်
ကိုလူထွေး September 15, 2009 at 3:33 PM
အဲ့လိုအမြဲရှုံးမယ်ဆိုရင်တော့ အမြဲ လာကစားပါတယ်...
ရုံလေးတတ်ဖူးရယ် သင်ပေးသိလား မမ
ရုံလေးတတ်တာကလေ တမျိုးပဲ Q ခိုးတမ်းလေ
ဘုရင်မှ လက်မှာကျန်တဲ့ လူ နဖူးတောက်ခံရတယ်
အကိုတွေ နှိပ်စက်ပုံများ ကြည့်ပါလား
လသာည September 15, 2009 at 4:17 PM
ပျော်စရာကြီးပါလား။ မဆော့တတ်ဖူး။ နောက်ကျ သင်ပေးဦးနော်..။
ဝက်ဝံလေး September 15, 2009 at 4:34 PM
အယ် ရှုံးပျော်တယ်ဆိုပဲ ဟိဟိ အဲ ပိုက်ဆံတွေ ဝံလေးကို ပေးလိုက်ပါလားလို့ ဟင့်
မကစားတတ်ဘူးရော သင်ပေးနော် သိလား
မိုးစက်အိမ် September 15, 2009 at 5:44 PM
အနော်ကတော. မရိုက်တော.ဘူး သွားကြားထိုးတံတွေဘဲ အများ
ကြီးယူလာတော.မယ် ... ပြီးရင် မကြီးနဲ. တစ်ယောက်တစ်ဝက် :P
ခြေလှမ်းသစ် September 15, 2009 at 7:15 PM
အမရေ အရုံးတော့ မခံနဲ့ ဒီတခါ အနိုင်သာပိုင်း
kiki September 15, 2009 at 10:27 PM
ဖဲကစားပြီးတော့ အဲ့ဒီသွားကြားထိုးတံတွေနဲ့ 
ဖဲ တော့ သိပ်မဆော့တတ်ဖူးကွယ်..
အမြဲ ရှုံး တတ်တာ နဲ့နှမြောလို့မဆော့ တော့တာ နဲ့မေ့ကုန်ပြီ..
ဂျိုကာ ၃ ကောင်နဲ့ တောင် မဒေါင်းတဲ့ ဖဲ..
ကဲ.. အဲ့ လို တော်တာ ..ဟိဟိ
အပျင်းပြေ ဆိုတော့ တော်သေးတယ်...
မီးမီးချစ် September 16, 2009 at 12:38 AM
မီးချစ် က ဒိုင်ပဲလုပ်မယ်..ဘယ်သူထိုးကြမလဲ ..လာထားနော်..း))
ThuHninSee September 16, 2009 at 10:08 AM
အိမ်ချမ်း September 18, 2009 at 12:53 PM
သဘောကျသွားတယ် မရိုစ်း)
ကလေးတွေနဲ့ ဘယ်လို အာရုံစိုက်ပါလိမ့်နော်၊ ဒါကြောင့် ဒေါင်ငါးသိန်းခွဲကျော် ရှုံးတာလားမသိ
yanmyo September 20, 2009 at 1:51 PM
Angel Shaper September 23, 2009 at 7:02 AM
ရှုံးပျော်လေး ဖြစ်လာတာလား မကြီးရေ.... ဟိဟိ